. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: မိုးရာသီလမ်းခွဲ
မိုးရေစက်တွေ ရွာချမလာသေးပေမယ့် မှောင်နက်နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာ ငါတကိုယ်တည်း ရပ်လို့ပေါ့ .. အတိတ်ဆိုတာ လွမ်းဆွတ်တတ်သူတယောက်အတွက် တမ်းတစရာတွေ တပုံတပင်နဲ့လေ .. ဒီလိုအချိန် ဒီလိုရာသီမျိုးနဲ့ တမိုးအောက်တည်း ငါတို့ လက်တွဲလျှောက်ခဲ့ဘူးသေးတယ် .. မိန်းကလေးဖြစ်ရက်နဲ့ ထီးဆောင်ရကောင်းမှန်းမသိတတ်တဲ့ ငါ့အတွက် နင်အမြဲတမ်း ထီးတချောင်း ယူလာတတ်ပေမယ့် တခါမှမဆောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူး .. မိုးဖွဲဖွဲကျရင် အထီးကျန်နေတဲ့လမ်းမကြီးကို ငါတို့နှစ်ယောက် အတူတူအဖော်ပြုလို့ .. မိုး သည်းသည်းမဲမဲရွာလာရင်တော့ အပြေးတပိုင်းနဲ့ နီးရာဆိုင်ကိုရှာရင်း မိုးခိုတတ်ကြသေးတယ် ..
ငါတို့ ဆုံတွေ့ခြင်းက မိုးရာသီနဲ့ပတ်သက်နေခဲ့တယ် .. မိုးစက်တွေကို ချစ်တတ်တဲ့ ငါနဲ့ မိုးရွာပြီဆို မျက်မှောင်ကုတ်နေတတ်တဲ့နင် ငါတို့ ဆုံတွေ့ခြင်းမှာ ကဗျာတွေ မဆန်ခဲ့ဘူး .. နင်က စတိုင်အပြည့်နဲ့ ကျော့နေအောင်နေတတ်တဲ့သူလေ .. ငါ့လို မှုန်တေတေ ဂျစ်ကန်ကန်မိန်းကလေးနဲ့ စတင်ဆုံဆည်းခြင်းကိုက လွဲမှားနေခဲ့တာပဲ ..
ငါ့မှာ နင်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဘ၀င်တွေ မြင့်သွားတဲ့ခံစားချက်မျိုး ခံစားဘူးခဲ့တယ် .. ဒီလိုချိန် မိုးဖွဲဖွဲထဲမှာပဲလေ ..
"ငါ နင့်ကို ချစ်တယ် ဟန်နီ .. ငါနှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးတခုမှမရှိတဲ့နင့်ကို ငါချစ်သွားခဲ့တယ် .." ဒီစကားကို မိုးရေစက်တွေရဲ့ လှည့်စားမှုကြောင့် ငါ့ကို ယောင်ရမ်းပြောခဲ့တာပဲ .. ဒါပေမယ့် ဒီစကားကြောင့် ငါဘ၀င်တွေ မြင့်သွားခဲ့တယ် ..
"ဟန်နီ .. မင်းကြောင့်ငါ ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ငါသွားရတော့မယ် .."
ဒီနေရာလေးမှာပါပဲ .. ဒီလိုစကားမျိုးကြားရမယ်မှန်း ကြိုသိခဲ့ရင် ဒီနေရာလေးမှာ ဆုံဖို့ ငါရွေးချယ်ခဲ့လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး .. ခုတော့ ဒီနေရာကိုရောက်တိုင်း ငါ့မှာ ပိုင်ဆိုင်ဘူးခြင်းနဲ့ ဆုံးရှုံးခြင်းအကြား ငါ့စိတ်တွေ လွန်ဆွဲနေခဲ့တယ် .. စကားမစပ် နင်ထားခဲ့တဲ့အဲဒီနေ့က မိုးတွေ တော်တော်သဲသဲမည်းမည်းရွာတယ် .. ငါ့ကိုအကာအကွယ်ပေးချင်လို့ ထင်ပါရဲ့ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 7/02/2009 10:57:00 AM
အကြောင်းအရာခွဲ ၀တ္တုတို, ဟိုမရောက် ဒီမရောက်